မဲဆွယ်ခြင်း မဟုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မဲဆွယ်ခြင်း မဟုတ်
Posted by မြစပဲရိုး on Nov 7, 2015 in My Dear Diary | 18 comments
ကိုယ်က ကောင်းပေ့ ဆိုတာ အလျှံအပယ် စားနိုင်ချိန် ဘေးမှာ ထမင်းနပ်မှန် အောင် မစားရသူ တွေ ရှိနေတာ သိရင် စားလို့ ဝင်ကြ မယ်လား။
ကိုယ်လဲစား ဘေးမှာလဲ ငတ်နေသူတွေ မရှိအောင်ထားနိုင်ရင် ပိုပြီး စားလို့ ကောင်းနိုင်ပါမယ်။
လူကိုလူချင်း စာနာတတ်ရင် စနစ်ဆိုး ကြီး တစ်ခု ကို ပြင်ပေးဖို့ ကြိုးစားပေးကြပါ။
မဟုတ်ရင် ချမ်းသာပေမဲ့ လူတောမတိုးနိုင်ဘဲ နွားခြေရာခွက် လေးထဲ မှာဘဲ ဝင်ဆန့်နေရသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
It is time for politics of compassion, fairness and putting people first.
We have to dream before our dreams can come true. :-))
မဲဆွယ်​ခြင်း မဟုတ်​ဆိုကတည်းက မဲဆွယ်​​နေတာ
မဲဆွယ် တာ ရ/မရ မသေချာ။ အခု ဟာက ဆွဲကို ယူတာ။ :-)))
မဲ ဆွယ် ခြင်း မဟုတ် ပါဘူး .. တိုက် တွ န်း တာ ပါ ..းး
အရီးလတ် စကား နားထောင် သော အားဖြင့် အရီးလတ် အလို အတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ် မဲ ထည့် ရန် အလို ငှါ့ ယနေ့ ည ရန်ကုန် ပြန်ပါမည်။
ကထူးဆန်း။ Respect you … Adore you ….
စကားနားထောင်လို့ တကယ်ကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-)))
အခုဘဲ ဒက်ဒီပါပါး နဲ့ မာမီမာမား တို့ ဆီက သတင်းရတယ်။
၇၀ကျော်တွေ ကို အိမ်ထိလာပြီး ကြိုတင်မဲယူသွားပါပြီတဲ့။
သမီး ပျော်သွားအောင်လို့ ပြောဖို့ စောင့်နေကြတာ တဲ့။
သူတို့ ခမျာ သမီး ယုံအောင် သူတို့ ထည့်လိုက်တဲ့ (ထုလိုက်တဲ့) နာမည်တွေ ကိုတောင် ရွတ်ပြကြတယ်။
ဇီကလေး ရဲ့ ဇာတ်လမ်း Swing Voter တွေ ဆီက မဲတွေ ပေါ့။
သမီး က တစ်ချိန်လုံးတရားဟော နေတော့ သူတို့ ခမျာလဲ တိုင်းပြည် အတွက် တာဝန်ကျေချင်နေတာ ဆန္ဒပြည့်ဝ သွားပြီတဲ့။
ဒီလို လူ တွေ ဆီက အမှန်တရား ကို မရိုးမဖြောင့် လုပ်ရဲ ကြမယ်လားတော့ မသိ။
ဒီ ကြိုတင်မဲ တွေ ဟာ အမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါရစေ။
အမေ ကတော့ သူတို့ မဟုတ်တာ မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။
တရားကိုစောင့်သော နတ်များ က သူတို့ ကို ကူ လို့ ဒီ လို မဲ ပေးနိုင်သတဲ့။
.နေပြည်တော်က ဝန်ထမ်း တစ်ချို့ (သို့) အများ ကို ကြိမ်းမောင်းပြီးတော့ အစိမ်းရောင် ကို မဲပေးဖို့ တွန်းနေကြောင်း ခိုင်လုံသောသတင်းမှ သိရပါတယ်။
ဒီလို အကြောက်တရားတွေ နဲ့ ရှင်သန် နေရတဲ့ ဘဝ က လွတ်အောင် ရုန်းထွက် ရမဲ့ အချိန်ပါ။
အခုပေးနေတဲ့ မဲ အများစု မှာ မျှော်လင့်ခြင်း၊ တရားမျှတမှုလိုလားခြင် တွေ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်း တွေ အများကြီးပါတယ်။
အဲဒါကို မဟုတ်မမှန် ပြောင်းပစ် ရဲ ကြ မယ်လား။
တနည်းနည်း နဲ့ လိမ်မှာ သိနေလို့ နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ကြားထဲ က ဘယ်လို နည်းသုံးပြီး ကလိမ်ကျမယ် မသိ။
ဒါမျိုး လုပ်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ကြီး ကို မောဟ အမှောင်ကြီး လွန်းမှ ရမှာ။
အဲလို အောက်လမ်းနည်းတွေသုံးပြီး နိုင် ရင် တိုင်းပြည် မှာ ပိုပြီး မယုံကြည် မှု သံသယ တွေ နဲ့ အေးချမ်းဖို့ လမ်းမမြင်တာ ကို အဆင်အခြင် နဲ လွန်းကြရင်လဲ ……
စစ်တပ်အင်အား ၄သိန်းလောက်မှာ.. မိသားစုပါထည့်တွက်ရင်… မဲပေးနိုင်တာ.. ၁သန်းလောက်ထွက်တယ်..။
တိုက်ရိုက်ဆွေမျိုးတွေပေါင်းရင်.. တပ်ချုပ်အမိန့်အတိုင်းသွားမှာက.. မဲ၂သန်းအသာလေး…။
ဘုန်းကြီးကျ.. အင်အား၅သိန်း..။ မဲတော့မပေးနိုင်..။ ဒါပေမယ့်..မိ၊ဘ..
သူတို့ကိုစကားနားထောင်မျက်စိမှိတ်ကိုးကွယ်သူက… နောက် ၅သန်းအသာလေး..။
အဲဒီထဲက.. အဖွဲ့ချုပ်က.. လွန်ရော ၃ပုံ၁ပုံပဲဆွဲယူနိုင်မယ်..။
၀န်ထမ်းက.. တပ်မတော်မပါရင် ၁သန်းလောက်ရှိတယ်..။
အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူက.. တိုင်းပြည်ရဲ့.. ၅-၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်မှန်းတယ်..။
ခရစ်ယာန်က.. ပိုမယ်..။ တိုင်းရင်းသားတွေပါသမို့.. ၁၂%ကျော်လောက်ရျိမယ်..။
အဓိပါယ်က.. မွတ်စလင်နဲ့ခရစ်ယန်က.. မဲပေးနိုင်သူ ၅သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်..။
ပြောချင်တာက.. လူထုမဲချည်းသက်သက်ဆို.. အဖွဲ့ချုပ်အပြတ်နိုင်တယ်…။ ၈၀+%
တပ်နဲ့ ဘုန်းကြီးနောက်ဆက်တွဲတွေထည့်တွေးရင်တော့.. တော်တော်လုပ်ရလိမ့်မယ်..။
ဒါပေမယ့်.. ဘာသာခြားတွေကူရင်မဲက ပြတ်ပြန်ရော…။
ရပ်ကွက်ထဲ.. မြို့ထဲ.. ရွာထဲ.. ဘာသာခြားအိမ်ရယ်..။ မဘသမဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆွမ်းခံနေတဲ့အိမ်ရယ်..ဘယ်ပါတီမဲပေးလည်းကြည့်ရင်.. ရလဒ်ပေါ်မယ်..။
မဲကလည်း.. ကွန်ပြူတာစနစ်မှာ.. နိုင်ဂျံဂါးတိုင်းပြည်တွေကစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တာမို့.. ညစ်ရခက်…။
နိုင်တယ်ဆိုပြီး.. တပ်သဘောမကျတာတွေလုပ်ကြပါလျှင်.. အခုကနေ… အစိုးရဖွဲ့ချိန် မတ်လကုန်လောက်အထိ.. အလွန်တရာမငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေလာမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဖြစ်နိုင်ပါလျှင်.. ဒေါ်စုက.. တပ်ချုပ်ဆီကမ်းလှမ်းဖုံးဆက်တာ အခုထဲက…လုပ်ထားသင့်ပါကြောင်း..။
ခေးးဒေဂို ချော့ ပေါင်းးးဂျ…!!!
Credit Htet Cho
ရွေးကောက်ပွဲကမနက်ဖြန်။ ဒါပေမယ့် ဟာသလေးတွေတွေ့ရတယ်။
“NLD ကို ၀န်းရံတဲ့လူတွေ လုပ်ရပ်ကို စိတ်ပျက်လို့ မဲမပေးချင်ဘူး။”
အဲ့ဒီစကားက ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ NLD ကို ၀န်းရံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကို စိတ်ပျက်လို့ NLD ကို မဲမပေးချင်ဘူးဆိုတာ ပိုတောင်ရယ်ရသေးတယ်။ NLD ကို ၀န်းရံတဲ့လူတွေကို စိတ်ပျက်လို့ NLD ကို မဲမပေးဘူးဆိုတာ အဲ့ဒီလူတွေက NLD လား။ အဲ့ဒီလူတွေဟာ NLD ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ရော သက်ရောက်မှုရှိလို့လား။ အစကတည်းက အစိမ်းဘက် ပါရင်ပါတယ်ပေါ့။
“ကြားနေ” ဆိုတဲ့စကားကတော့ အရယ်ရဆုံးဘဲ။ စိမ်းတယ်ဆိုရင် စိမ်းတယ်ပေါ့ကွယ်။ “ကြားနေ” ဆိုတဲ့အကာအကွယ်ကို မယူနေနဲ့။ တရားမျှတမှုနဲ့ မမျှတမှုကြားမှာ middle ground မရှိဘူး။ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှု၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ခွင့် (Freedom of Speech) ကို အကာအကွယ်ပြီး ပြောတုန်းကပြော။ ရွာပြင်ထုတ်ခံရမှ သူတို့ကဆဲပါတယ် ပြောတယ်။ ရတယ်လေ။ ပြောဖူးသလို Freedom of Speech ဆိုပြီး နာဇီအလံကြီးကိုင်ပြီး ဘာလင်မြို့ထဲလျှောက်ပြေးကြည့်ပေါ့။ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းခံရမှ ခံရတယ်မပြောနဲ့ပေါ့ကွယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ်ကိုယ်တာဝန်ယူပေါ့။
လောဂျစ်အကျိုးအပျက် Half-baked logic တွေ ၊ အမှန်တရားတစ်ဝက် Half-truth တွေ မြင်လာရတာ အတော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာဘဲ။ ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေကိုယ်တိုင်ကိုက အဲ့ဒီ လောဂျစ်အပျက်နဲ့ အမှန်တစ်ဝက်တွေကို ဟုတ်တယ်ကွ လုပ်နေကြတာ ပိုတောင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ အင်း… Education =/= Rational Thinking လို့ဘဲပြောရမှာပေါ့။
ပခဖ ကို ဝိုင်းရံသူတွေ ကို လဲ စမ်းစစ်ကြည့်ကြပါဦးတော့။ :-))
.အခု NLD တကယ်နိုင် သွားပြီ
သမ္မတရွေးပွဲလာပါပြီ..။ မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေအရ..သမ္မတကို… လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရွေးကောက်တင်မြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်…။
၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကရွေးတဲ့.. ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..။ (အမေရိကားမှာဆို.. House of Representatives, အောက်လွှတ်တော်)
အဖွဲ့ချုပ်က… ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ..(တပ်ကိုယ်စားလှယ်မပါ) ၅၁%အထက်ရှိနေရင် ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..တင်ပေးလို့ရမယ်..။
အဖွဲ့ချုပ်က…အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ..(တပ်ကိုယ်စားလှယ်မပါ) ၅၁%အထက်ရှိနေရင် ဒုသမ္မတ…၁ယောက်..တင်ပေးလို့ရမယ်..။
တပ်ကတော့ …အော်တိုမစ်တစ်… ဒုသမ္မတတယောက်တင်မယ်..။
အဲဒီ ၃ယောက်ထဲကမှ… ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခေါ်တဲ့.. ပြည်သူ့+အမျိုးသား+တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေက… သမ္မတတယောက်ကို တင်ရမယ်..
သူကြီး အရင်တုန်းက တစ်ညွန့်ညွန့် လုပ်နေခဲ့တာကိုများ။
ပြောသာပြောရ အခုထိ သက်ပြင်းချမရသေးပါ။
အဲဒီလို ညွန့် ရအောင် မနိုင်တဲ့ ကြားက အတင်းလုပ်နေတုန်း။
ကျွန်မ ကတော့ မကောင်း တာ ကို ရှေ့ထားထားပြီး ကြည့်နေမိတာဘဲ။
တတ်နိုင်သလောက်တတတ်တအား ကန်င်ပိန်းကစားကြည့်တာပါ..။ အမေရိကားမှာလည်း ပါတီ၂ဖက်လုံးမှာပါဝင်ကူညီ..ငွေလှူပြီးကို ကစားတယ်..။
၄၉% မထားခဲ့မိတာ နာ တာဘဲ လို့ အချင်းချင်း အပြစ်တင်နေချင် နေကြမှာ။
.မေမေ နိုင်ပြီ… မေမေနိုင်ပြီ…